I-United States kunye ne-China iinkokheli ezipheleleyo kumandla omoya | Ukuhlaziywa okuluhlaza
UTomàs Bigordà | | Umoya ovuselelekayo
Kwilizwe jikelele, inkokeli engenakuphikiswa kumandla efakiweyo yamandla omoya yi China, amandla ayo angaphezulu kwe-168.7 gigawatts (GW,) ixesha ngalinye kunye Uncedo olungakumbi kowesibini, eUnited States. Le ilahlekelwa ngumhlaba ngenxa yezigqibo zikarhulumente weTrump, ezinamandla afakelwe i82.1GW.
Kumdlalo weWindaba wonyaka eMzantsi Afrika, uSteve Sawyer, Unobhala Jikelele we-Global Wind Energy Council (GWEC) okhankanyiweyo elindele ukuphela okumangalisayo kowe-2017.
Ngokwengqikelelo yakhe, unyaka ungaphela phakathi kwe-530 GW kunye ne-540 GW yamandla omoya efakwe kwihlabathi liphela.
Xa ebuza malunga nemibono evela kwamanye amazwe, unobhala wathi "iMexico, iBrazil noMzantsi Afrika ziyaqhubeka ukuba ziimarike eziphambili. Sisenokholo olukhulu kwezi marike. " I-Indiya iyaqhubeka ukuphucula kwaye igqitha eSpain kangangeminyaka eliqela ngaphakathi I-10 yeyona mveliso kakhulu kwihlabathi, kwaye inokwenzeka ukuba iqhubeke ngaphandle kokubuyiselwa kwemarike yaseSpain.
Ngapha koko, iJamani neTurkey ziyakhula e indlela ebalulekileyoKwaye iNetherlands yangena kwishumi eliphezulu okokuqala kwiminyaka engama-20, ngenxa yamandla ayo kunxweme lwamandla omoya.
Ukuba ujonga iYurophu, inkokeli ngokwe ukungena okukhulu yamandla omoya yiDenmark, ene-40% yamandla elizwe avela ngumoya.
Ukujonga kwamanye amazwekazi afana noMzantsi Melika, iArgentina kuya kufuneka ibe ukubheja okukhulu, kunye nokumiliselwa okukhulu kwabavelisi ePatagonia. Ngapha koko, amandla afakiweyo okulindelekile kulindeleke ukuba afike ngaphezulu kwe-800 GW ngasekupheleni kuka-2021.
USawyer, oza kutyelela amazwe aliqela ase Mzantsi Melika ngoFebruwari 2018 ukuba athathe inxaxheba eMexico Windpower 2018 Expo nakwiCongress, ehlelwe yiMexico Wind Energy Association (AMDEE), iBhunga laMandla oMoya kwiHlabathi liphela (GWEC) kunye nomrhwebi wezorhwebo kunye nomqhubi wenkongolo u-EJ Krause UTarsus de México, uthe okwangoku iimarike ezingama-29 ngoku zingaphezulu kwe-1 GW ye umthamo ofakiweyo, Kwaye i-9 yazo sele zinokungaphezulu kwe-10GW yomthamo ofakiweyo.
Uye wongeza ukuba ukuvela kwetekhnoloji ibalulekile, kodwa ayimangalisi, ngaphandle nje kolunye uphuhliso kumandla omoya kunxweme.
1 Ixesha elizayo
2 Iifama zomoya ezinkulu kakhulu emhlabeni
3 1. IZiko laMandla oMoya laseAlta:
4 2. Abalusi beFama yoMoya oyiFlat:
5 3. Iifama zomoya iRoscoe:
Iifandesi ezininzi zombane mega ziyaqhutywa kumazwe aliqela ehlabathi, njengeSpain okanye iMexico, notyalo-mali lwezigidi zeedola. Oku kuyakuwaphucula amanani aboniswe apha ngasentla kule minyaka mibini okanye mithathu izayo.
Ngaphandle kobunkokheli obupheleleyo base China, ezona fama zomoya zinkulu ehlabathini Ayinakufunyanwa kwindawo yabo, baphi?
Iifama zomoya ezinkulu kakhulu emhlabeni
Iifama ezi-8 kwezili-10 ezinkulu zomoya ezisehlabathini zibekwe eUnited States, ezintlanu zazo zibekwe eTexas. Kwakhona, phakathi kwi-TOP 10 inye kuphela ifama yomoya elunxwemeni, ingabo bonke abanye abasemhlabeni. Siza kubona ezinkulu ezi-3, ungabona ukwahlulahlula oku kulandelayo ikhonkco
1. IZiko laMandla oMoya laseAlta:
El IZiko laMandla oMbane eAlta (I-AWEC, iZiko laMandla oMbane iAlta) ebekwe eTehachapi, eCarlifonia, eUnited States, okwangoku eyona fama yomoya inkulu emhlabeni, enamandla okusebenza eyi-1.020 MW. Ifama yomoya waselunxwemeni iqhutywa ziinjineli zeTerra-Gen Power, ezintywiliselwe ngoku kulwandiso olutsha ukunyusa amandla kwifama yomoya ukuya I-1.550 MW.
2. Abalusi beFama yoMoya oyiFlat:
Ime kufutshane neArlington, kwimpuma yeOregon, eUnited States, yeyesibini ifama yomoya enkulu emhlabeni enendawo efakelweyo I-845 MW.
Iphuhliswe ziinjineli zeCaithness Energy, eli ziko ligubungela ngaphezulu kwe-77 km² phakathi kweGilliam neMorrow counties. Iprojekthi, ephuhliswe ziinjineli ze Amandla eCaithness kwindawo engaphezulu kwe-77 km² phakathi kwamabali aseGilliam naseMorrow, ulwakhiwo lwaqala ngo-2009 ngexabiso eliqikelelweyo nge-2000 yeebhiliyoni zeedola.
Ipaki yenziwe ngee-turbines ezingama-338 ze-GE2.5XL, nganye inesakhono esikwi-2,5 MW.
3. Iifama zomoya iRoscoe:
El I-Roscoe Wind Ifama ikufuphi neAbilene eTexas, eUnited States, kungoku nje yeyesithathu ngobukhulu kwifama yomoya emhlabeni enomthamo ofakiweyo I-781,5 MW, Iphuhliswe ziinjineli ze-E.ON zemozulu kunye neRenewables (EC&R). Ulwakhiwo lwenziwe ngezigaba ezine phakathi kuka-2007 no-2009, egubungela indawo engama-400 km² efama.
Ngokukodwa, isigaba sokuqala siquka ukwakhiwa kwee-209 zeMitsubishi turbines ze-1 MW, kwisigaba sesibini i-55 turbines ze-Nokia ze-2,3 MW zafakwa, ngelixa isigaba sesithathu nesesine sidityanisiwe i-166 GE turbines ye-1,5 MW kunye ne-197 yeinjini iMitsubishi ye-1 MW ngokulandelelana. Iyonke, Ii-injini zomoya ezahlukileyo ezingama-627 zafakwa kumgama weemitha ezingama-274, eyaqala ukusebenza kunye ngokuzeleyo ukusukela ngo-Okthobha u-2009.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Umoya ovuselelekayo » I-United States kunye ne-China iinkokheli ezipheleleyo kumandla omoya
U-Enel uya kuvelisa amandla anexabiso eliphantsi emhlabeni eMexico